मुलुकमा ह्वातै बढ्यो सुरक्षा चुनौती ! हतियारसहित ब्यारेकबाट निस्किए १३ हजार नेपाली सेना !::Hamrodamak.com
मुलुकमा ह्वातै बढ्यो सुरक्षा चुनौती ! हतियारसहित ब्यारेकबाट निस्किए १३ हजार नेपाली सेना !
सेनाले द्वन्द्वकालकै समयमा जसरि नियमित गस्ती थालेसँगै मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा अवस्था अति नै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ ।
काठमाडौँ। मुलुकभर सुरक्षा चुनौती बढेपछि हतियारसहित द्वन्द्वकालकै शैलीमा १३ हजार नेपाली सेना गस्तीमा निस्किन थालेका छन् । सेनाले सुरक्षा स्थिति जटिल बनेको निष्कर्ष निकाल्दै करिब १३ हजार सैनिक फौजलाई हतियारसहित नियमित गस्तीमा खटाएको हो ।
विभिन्न आपराधिक तथा पृथकतावादी समूहका गतिविधि ह्वात्तै बढ्न थालेपछि नेपाली सेनाले नागरिकमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन ३ तहको नियमित गस्ती सुरु हो ।
केही साता अघिमात्रै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पत्रकार समेलन नै गरेर आपराधिक तथा पृथकतावादी समूहका गतिविधि भइरहे सेना चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए ।
गस्तीका क्रममा अन्य सुरक्षा निकायसँग समेत सुरक्षा व्यवस्थापनबारे समन्वय थालिएको सैनिक अधिकारीहरूले जनाएका छन् । गृह मन्त्रालयले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, सीके राउत, अन्य जातिय तथा सशस्त्र समूहका आपराधिक तथा पृथकतावादी गतिविधि बढेको पाएपछि देशभर नियमित गस्तीमा फौज तैनाथ गराएको हो ।
सैनिक अधिकारीले यो गस्तीलाई अन्य सुरक्षा निकायलाई सहयोग पु¥याउन तथा अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि भएको र यसलाई अन्यथा नलिन भन्दै यसबारे स्पष्ट पारेका छन् । सैनिक मुख्यालयले गस्ती अन्तर्गत १३ हजार ५ सय भन्दा बढी फौज खटिएको जानकारी गराएको छ ।